Maxamed Saalax, Gary Neville & Xiddigaha Waaweyn
Manchester City ayaa u muuqata mid ku guuleysaneysa Premier League xilli ciyaareedkan iyadoo xiddiggeeda ugu waa weyn horyaalka.
Jurgen Klopp ee Liverpool ayaa helay 40 biladood ciyaartoydooda iyo shaqaalahooda xilli ciyaareedkii hore.
Sida laga soo xigtay kooxda haatan jirta, 23 ciyaartoy ayaa loo balan qaadayaa billad haddii ay ciyaaraan shan ama wax ka badan kulamada horyaalka xilli ciyaareedkii hore.
Laakiin qof walba maheli doono inuu helo billadaha ku dhacay xiddigihii waaweynaa ee horay ugu guuleystay horyaalkan.
Halyeeyga kooxda Man United ee Gary Neville ayaa kula guulaystay kooxda Man United sideed horyaal oo Premier League ah, taas oo noqon lahayd 10 hadii uusan tirin lahayn laba xilli ciyaareed bilad la’aan.
Neville wuxuu saftay kulankiisii ​​ugu horeeyay xilli ciyaareedkii 1993-94, laakiin kaliya hal xilli ciyaareed ayuu la ciyaaray ciyaartoyda looga baahan yahay inay bilaabaan toban kulan si ay u helaan bilada, kooxdiina shan jeer ayaa la badalay 2012.
Ka dib xilli ciyaareedkii 2009-10 markii United ay ku guuleysatay horyaalka, Neville wuxuu ciyaaray afar kulan xilli ciyaareedka ka hor inta uusan fariisan xilli xilli ciyaareedku socday.
Masar ayaa ku guuleysatay Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore, waxaana ay Liverpool ka caawisay hanashada Premier League. Laakiin markii uu amaah uga tagay kooxda heysata Premier League xilli ciyaareedkii 2014-15, Mo Salah kuma uusan guuleysan billad maxaa yeelay wuxuu u saftay seddex kulan blues xilli ciyaareedkaas.
Cuadrado oo bedel ku soo galay, kaasoo ku fashilmay kooxda, ayaa ku guuleystay billadda ka dib markii uu 14 kulan u saftay Blues.
Iyadoo xiddigii hore ee Bayern Munich uu la dhibtoonayo dhaawacyo dhowr ah, layaab malahan inuu seego horyaalka Premier League ee Manchester United. Kaliya hal billad ayuu la qaatay United 2008 laakiin wuxuu seegay xilli ciyaareedyadii 2009 iyo 2011.
Markii ay Manchester City ku guuleysatay horyaalka 2012, wuxuu sidoo kale seegay horyaalka Premier League isagoo hal kulan u saftay.
Macheda ayaan nasiib u yeelan inuu seego horyaalka Premier League, gaar ahaan guushii 3-2 ee ay ka gaareen Aston Villa taasoo u horseeday guushoodii 2009.
Wuxuu ciyaaray afar kulan xilli ciyaareedkaan wuxuuna dhaliyay labo gool laakiin ma uusan helin billad.
Macheda ayaa sidoo kale seegay horyaalkii xilli ciyaareedkii 2010-11.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee daafaca ayaa seegay horyaalkii Premier League sanadkiisii ​​ugu horreeyay ee Chelsea iyadoo Carlo Ancelotti uu ciyaaray kaliya labo kulan xilli ciyaareedkii 2009-10 ee Champions League.
Laakiin Matic ayaa ku guuleystay bilada horyaalka sanadihii 2015 iyo 2017.
Daafaca Manchester United ayaa ku guuleystay shan horyaal intii uu hogaaminayay Sir Alex Ferguson.
Laakiin kaliya wuxuu ciyaaray sideed kulan intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2008-09 dhaawac dartiis waqtigaasna waxaa sharci ahayd in ciyaaryahan uu ciyaaro toban kulan si uu ugu guuleysto horyaalka.
Laba sano kadib, taariikhda ayaa la qoray oo seegay billad kale.
Sannadkii 2012, Micah Richards ayaa ahaa xiddiggii Man City ka caawiyey hanashada horyaalkeedii ugu horreeyey ee Premier League.
Laakiin intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2013-14, kaliya labo kulan oo horyaalka ah ayuu ciyaaray sababo la xiriira dhaawacyo iyo qaab ciyaareed liita, taasoo u horseeday inuu seego horyaalka.
The One Dinner Meals to Devour to Keep away from Coronary heart Illness,
50 Meals That Can Purpose Coronary heart Illness